Nkpọrọ ụkwụ na ntan; Otu esi wepu otu adreesị IPv6 site na nchịkọta profaịlụ Google Analytics gị
Anyị maara nke ọma na internet nwere ọtụtụ nde ijeri website ma ọ bụghị naanị otu n'ime anyị ka ọnụ ọgụgụ ha dị. Mgbe anyị jikọtara kọmputa anyị, laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka na ịntanetị, ngwaọrụ anyị nwere ike igosi otu adreesị IP kpọmkwem nke anyị kenyere ya ịbanye na akaụntụ ma ọ bụ sọọfụ weebụsaịtị.
Ụwa anyị bi n'ime ya nwere ọtụtụ adreesị IP. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ọtụtụ puku IP, ọ dịghịkwa ụzọ isi melite ma melite àgwà ha - commercial appraisals. Otu ụzọ, nke a na - akpọ IPv6, nwere ike ime ka ụmụ nwoke, ndị inyom, na ụmụaka niile nweta ịntanetị na - eji adreesị IP ha.
Oliver King, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara , na-akọwa ebe niile ịkwesịrị ịga n'ihu nke ọma.
Olee otú usoro a si arụ ọrụ na ndabere ya?
Ị gbalịrị ịmara otú usoro a si arụ ọrụ na ihe bụ akụkọ ntolite ya? Ọ bụrụ na ị nụtụbeghị ihe ọ bụla gbasara Ịntanetị Nhọrọ Ịntanetị (IANA), ka m gwa gị na ọ bụ adreesị ma ọ bụ ohere a ga-ekenye na laptọọpụ niile, mbadamba na ngwaọrụ mkpanaka n'ụwa. Usoro a na - arụ ọrụ na ndekọ mpaghara internet dị iche iche, nke a na - akpọ ndị RIR. Ọ na-ekesa kọntaktị dị iche iche na IP dị iche iche wee gụọ ha na koodu ndị ahụ n'oge na-adịghị anya. Ndị na-ahụ maka ịntanetị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ị na-akwụ ụgwọ ịntanetị gị nwere ike ịnye gị koodu ntinye iji nweta ịntanetị site na WiFi ma ọ bụ usoro ọzọ yiri ya. Ọ dị mfe ịnweta ma rụọ ọrụ na-ejikwa ịntanetị ejiri ọtụtụ aha, nọmba, na ihe odide..A na - akpọ ndị a niile dịka ICANN ma nwee ike ịpụ iche site na ibe ha.
Ewezuga adreesị IPv4 gị ma ọ bụ IPv6 gị na data profaịlụ Google Analytics
Ịchọrọ igbochi adreesị IPv6 na nchịkọta Google Analytics gị? N'ebe a, anyị nwere ike inyere gị aka ịrụ ọrụ ahụ n'ụzọ ka mma. Enwere ohere na e kenyere gị koodu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ. Ị nwere ike iji koodu a ma ọ bụ nọmba a iji nweta adreesị IPv4 ọdịnala. Maka nke a, ị kwesịrị ịbanye na akaụntụ Google Analytics gị ma nweta ngalaba nhazi ka ịzie ntọala. Ị ga-eji nchịkọta ọhụrụ Google Analytics iji nweta nsonaazụ ọchụchọ. Na ngalaba ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ihe onwunwe weebụ ma ọ bụ profaịlụ ịchọrọ itinye ihe nzacha. Ozugbo a họpụtara ha, nzọụkwụ ọzọ bụ ịpị nhọrọ nhọrọ nhazi a gbanwere ma gbanwee menu mwube iji nweta ozi ọhụrụ na mmelite banyere usoro a dum. Nzacha na akaụntụ Google Analytics nwere ike were ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ maka ịrụ ọrụ zuru oke, n'ihi ya, ị ga-adị njikere inye ha oge buru ibu tupu i jiri ha niile mee ihe.
Adreesị IP ọdịnala na - adreesị IPv6
Adreesị IP ọdịnala na-ele ihe dịka 192.368.255.255, a na-ekenye ya niile na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ ngwaọrụ na ekwentị mkpanaaka. O nwere ọnụọgụgụ site na otu rue 255 ma nye ya nọmba na-akparaghị ókè. IPv6 IP yiri ihe dị ka 4,294,367,296 ma ọ bụ dị ka 2001: d18: 0: 1234: 0: 567: 8: 1. Ha abụọ nwere àgwà nke ha, nhọrọ, uru, na ụkọ ihe ọ bụla.